केही हप्ता भित्र कोरोना ‘रोग’ को रुपमा फैलन सक्ने विज्ञको चेतावनी
काठमाडौं । चिकित्सकहरुले कोभिड १९ रोकथामका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसके संक्रमण रोगको रुपमा फैलन सक्ने बताएका छन् । सरकारले कोभिड १९ रोकथामका लागि गरेको कामको प्रकृति हेर्दा केही हप्ता भित्र नै संक्रमण ‘रोग’ को रुपमा फैलन सक्ने संकेत देखिएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ चिकित्सक डा. सुन्दरमणि […]
निषेधाज्ञापछि महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर सुनसान
महोत्तरी-समुदायस्तरमा कारोना भाइरसको संक्रमण फैलिन थालेपछि स्थानीय प्रशासनले गरेको निषेधाज्ञाका कारण महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर सुनसान बनेको छ । निषेधाज्ञाका कारण सदरमुकाम बजार क्षेत्रमका पसलहरु बन्द छन् । अतिआवश्यक सेवाका पसलहरु मात्र खुलेका छन । निषेधाज्ञाका कारण आज मुस्लिम धर्मावलम्वीको दोस्रो ठूलो पर्व बकर इद घरमै मनाइएको छ । अन्य समय यस पर्वमा हजारौँको भीड सडकमा […]
काठमाडौं-काठमाडौं उपत्यकामा आज ६ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौंका ५ जना र भक्तपुरका १ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । हिजो पनि उपत्यकामा ३८ जनामा कोरोना देखिएको थियो । त्यस्तै मुलुकभर पछिल्लो २४ घण्टामा ३ सय १५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ […]
एकता कायम राख्ने नाममा गलत विचार र प्रवृतिको ढाकछोप गर्न सकिदैन : प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकता कायम राख्ने नाममा गलत विचार र प्रवृतिको ढाकछोप गर्न नसकिने बताएका छन् । कम्युनिष्ट नेता तुलसीलाल अमात्यको २३ औं स्मृति दिवसका अवशरमा आयोजिक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले गलत विचार र प्रवृतिहरुको ढाकछोप नगरी फछ्र्यौट गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष दाहालले समाचारहरुमा आएजस्तो पद प्राप्तीका लागि पार्टीभित्र […]
इनफ इज इनफका अभियन्ता पक्राउ
काठमाडौँ । सरकारले अनशनमा बसेकाहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका ‘इनफ इज इनफ’ का अभियन्तालाई आजपनि पक्राउ गरिएको छ । आज काठमाडौंको नक्सालस्थीत भाटभटेनी क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न पुगेका २० भन्दा बढिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियान प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नगरेको तथा आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ‘इनफ इज इनफ’ […]
‘रातकी रानी’सँग मस्त पूर्वमन्त्री विष्ट
दाङ– रातकी रानीसँग मस्त भएका तत्कालिन नेकपा माओवादीका प्रभावशाली नेता एवम पूर्वपर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट दुई वर्षमै पुनः चर्चामा आएका छन् । दाङको बिजौरीमा २ वर्ष अघि सुरु गरेको ड्रागन फल (रातकी रानी) रोपेर आम्दानी बढाउन थालेपछि उनी चर्चामा आएका हुन् । रुकुममा जन्मिएर त्यही क्षेत्रलाई राजनीतिक थलो बनाएका उनी कृषि कर्मथलो दाङलाई बनाएर काम […]
सभामुख सापकोटाको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीमा कोरोना पुष्टि
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । सभामुख सापकोटाको अगुवा गाडीमा रहने प्रहरीलाइ कोरोना पुष्टि भएको हो । स्रोतका अनुसार संक्रमित प्रहरी साउन ६ गतेसम्म सभामुखको अगुवा सवारीमा सुरक्षार्थ खटिइरहेको थिए । उनीसँग सम्पर्कमा आएका सबैको स्वाव संकलन गरिएको र उनीहरुको रिपोर्ट भोलिसम्म आइसक्ने जनाइएको छ […]
पहिरोमा पुरिएर जाजरकोटमा एक बालक बेपत्ता
जाजरकोट । जाजरकोट भेरी नगरपालिका—७ दोकानाका एक बालक पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएका छन । अर्का बालक घाइते भएका छन् । घर नजिकैको पाखोमा बाख्रा चराउन गएका एक बालक पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएका हुन । बाख्रा गोठालो गएका धनवीर परियारका १२ वर्षीय छोरा खिमबहादुरलाई एक्कासी आएको सुख्खा पहिरोले पुरेर बेपत्ता पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटले जनाएको […]
सभामुख निवासमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख निवासमा कार्यरत एक जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सरकारी निवास बालुवाटारमा कार्यरत ती कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो । अहिले सभामुखसहित ३० भन्दा बढीको स्वाब संकलन भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ । ती पुरुष कर्मचारीमा शुक्रबार कोरोना पुष्टि भएको थियो ।
अब सबै नगरपालिकामा व्यवस्थित सहरीकरणको मापदण्ड लागु हुने
काठमाडौं – अब सबै नगरपालिकाले व्यवस्थित सहरीकरणको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएको छ । अधिकांश नगरपालिका व्यवस्थित सहरीकरणतर्फ उन्मुख हुन नसकेका बेला अब व्यवस्थित मापदण्ड पालना गराउने तयारी गरिएको हो । नेपाल नगरपालिका सङ्घले २९३ वटै नगरपालिकाको एकीकृत सहरी पूर्वाधारको विकासको मापदण्ड अगाडि सारेको छ । सङ्घले सबै नगरपालिकामा सहरी पूर्वाधार कायम गर्ने, सहरी गरिबी, सुुकुम्बासी […]